Global Voices teny Malagasy » Tantaranà Pelaka, Lehilahy Mainty Avy Amin’ny Tanàna Mahantra Ao São Paulo Ary Lasa Mpamokatra Sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2017 14:33 GMT 1	 · Mpanoratra Agência Mural Nandika (en) i Gustavo Xavier, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Valter Rege ao amin'ny tafon'ny tranony izay hanaovany lahatsary ho an'ny fantsony YouTube antsoina hoe “Energia Positiva.” Sary: Vagner Vital/Agência Mural, nahazoana alalana
Ity lahatsoratra avy amin'i Vagner Vital ity dia navoakan'ny  Agência Mural voalohany. Navoaka eto indray izany noho ny fiarahamiasa eo amin'ny Global Voices sy Agência Mural.
Teo amin'ny faha enin-taona, nahatsapa i Valter Rege fa tsy mora ny fiainany. Tao anatin'ny fanevatevana azy toy ny “gidro” sy “sarimbavy”, niala ny nifiny sasany tamin'izy nianjera ka voadonan'ny sisin-dalana ny molony rehefa natosik'ireo tovolahy. Fantany fa fanamby ny maha sarimbavy sy mbola velona, na dia tsy fantany akory aza ny tena dikan’ izany teny ampiasaina (sarimbavy) iantsoana azy izany fa tsy amin'ny anarany .
Nizaka ny mafy, nahita fomba hiadiana sy hiresahana i Valter Rege tamin'ny alalan'ny fakan-tsariny. Nanangana fantsona YouTube ‘Energia Positiva ’ (Hery Tsara) izy, teny filamatra izay napetany tao amin'ny tanany havanana, sy sehatra iresahany momba ny fanomezan-kery ho an'ny mainty, ankoatra ireo olana hafa. Ny tampon-trano izay hanaovany lahatsary dia tsy aiza fa ao amin'ny iray amin'ireo faritry ny mahantra ao Villa Clara, atsimon'i São Paolo, izay toerana ivelany manokana hiasany.
Porofo amin'ny fampiasana zavatra hafa ny toerana ny lamba mihahy eo akaikin'ny sinin-drano. “Tsy menatra aho maka sary eto sy mampiseho ny toerana onenako. Zava-misy iainako izany,” hoy izy. “Mampiseho ny tanàna mahantra ao amin'ity tanàna ity eto amin'ny tampon-trano.”.
Feno 32 taona, mirefy 1m62 miaraka amin'ny tsiky lehibe, mizara ny fotoanany amin'ny fantsona YouTube sy ny fanatanterahana ny nofiny hafa. Noho ny fanampian’ ny mpiaramiasa aminy, nanoratra rafin-tantara nahazoany famatsiam-bola avy amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina Breziliana izy mba hovokarina amin'ny horonantsary fohy antsoina hoe “Preto no Branco” (Mainty Ambony Fotsy). Sarimihetsika izay mbola tsy fantatra izay hivoahany, ary sangan'asa matihanina voalohany an'i Rege.
Milaza tantarana tovolahy mainty hoditra (nolalaovin'ilay mpilalao sarimihetsika Marcos Oliveira) voampanga ho nangalatra rehefa nandòna vehivavy teo anoloan'ny toeram-pivarotana iray ny tantara. Rehefa nentina tany amin'ny sampan-draharahan'ny polisy, nampametra-panontaniana ny tsy maha tsy manan-tsiny azy noho ny fankahalana ara-poko sy ny fanavakavahana ara-poko.
Ao amin'ny iray amin'ireo fifanandrifian-javatra izay maka tahaka ny fiainana ny zava-kanto, rehefa nidina tao anaty fiara fitateram-bahoaka handeha hiasa i Rege, najanon'ny vehivavy iray izy izay nitabataba taminy hoe: “Mpangalatra! mpangalatra ianao! Nangalarinao ny findaiko!” Taitra be sy very hevitra, namaly izy hoe tsy nangalatra izany no sady nanohy nandeha namonjy ny tranobe misy ny toeram-piasany.
“Naniry mba afaka nijery ny masony aho ary nilaza taminy fa tsy afaka miampanga olona tahaka izany izy, saingy natahotra aho. Natahotra ny ho voadaroka aho sy natahotra ny polisy mety hanasazy ahy tsy ara-drariny”, hoy izy. Niantso polisy ilay vehivavy, ka fotoana fohy taorian'izany, tonga nandòndòna tao am-baravaran'ny orinasa iasan'i Valter ny polisy. Soa ihany, tsy mitovy amin'ny mpiambina misahana ny fiarovana ao amin'ny orinasa ny famariparitana ilay lehilahy notadiavina, ka lasa nandeha ilay vehivavy sy ny polisy manamboninahitra.
«Nisy ny firoboroboan'ny andrimasom-pokonolona tamin'izany. Natahotra aho sao misy olona manaraka rehefa mandeha irery», hoy izy. “Mampalahelo raha mandalo amin'izany amin'ny fahazazanao ianao ary mahita fa mbola mitohy izany na dia efa lehibe aza ianao”.
Maka ny sarimihetsika fohy “Preto no Branco.” Sary: tahiry manokana, nahazoana alalana ny famoahana ny sary.
Nandritra ny fahazazany, niara-nipetraka tamin'ny ray aman-dreniny sy ny anabaviny roa tao afovoan’ ireo trano goavambe ao amin'ny faritra Moema izy, faritra anisan’ ny mpanankarena indrindra ao São Paulo. Efi-trano fidiovana roa ihany no itambaran’ izy ireo sy ny fianakaviana hafa miisa 30.
Teo amin'ny faha-10 taona, afaka nahatakatra ny antony tsy namelana azy hiara-milalao amin'ny ankizy nonina tao amin'ireo trano goavambe sy ny tranobe mihaja izy, toerana izay iasan'ireo renim-pianakaviana avy ao amin'ny tanàna mahantra. Nahatonga ny fianakaviany hifindra ao Vila Clara, faritra mahantra ao an-tanàna ny fiakaran'ny vidim-piainana tao amin'ny faritra. Tsy mora ny niatrika fiainana vaovao. Nanjary namana tsy misaraka aminy ny VCR (lecteur) sy ny Fahitalavitra.
Nanomboka nahafantatra ny tenany ho mainty hoditra izy teo amin'ny taonan'ny fahatanorany, taorian'ny fahafantarana ny sarimihetsika. “Tao Moema, isaky ny nahita olona mainty hoditra teny an-dalana aho, nifindra teny am-pitan-dalana. Nandrisika ahy ny sarimihetsika mba ahafantatra ny faritra vaovao misy ahy, sy mahita ireo mainty hoditra hafa ary hanaiky ny tenako toy ny iray amin'izy ireo,” hoy izy.
Tamin'ny iray amin'ireo lahatsariny YouTube, niverina teny an-dalana izay nonenany tao Moema i Rege ary nampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny toerana roa nonenany ary koa ny maha zava-dehibe ny fanorenana ny fanajan-tena sy ny fihamboana ao amin'ny faritra nonenany.
Manomboka ho tanteraka amin'ny alalan'ny sarimihetsika notontosainy tao an-trano tamin'ny fakan-tsary 8mm novidiany tamin'ny karamany tamin'ny asa voalohany ho irakiraka ny rafi-tantarany voalohany, nosoratana teo amin'ny faha-13 taona. Niasa ho irakiraka tao amin'ny fivarotam-boky iray izy ary efa nanao miaramila tao amin'ny Tafika An'habakabaka mandra-pahazoany vatsim-pianarana hianatra momba ny onjam-peo sy ny fahitalavitra tao amin'ny Universidade Belas Artes. Tao no nianarany ny fototry ny famokarana asa matihanina kokoa, ary namoaka ny “Quero ser Beyoncé” (Te-ho Beyoncé aho) izy, horonantsary amin'ny halavany antonony momba ny fanomezan-kery ho an'ny vehivavy ary naseho tao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina Banco do Brasil.
Fotoana fohy taorian'izany, nampahafantatra tetikasa hafa amin'ny endrika boky antsoina hoe “sempre Amigos” (Namana Mandrakizay) – navoakan'ny Multifoco izy – izay itantarany ny tantaran'i Eduardo, tanora lehilahy pelaka nahita ny ara-nofony ary nianatra hankasitraka ny tenany.
“Te hampiseho ao anatin'ity boky ity ny maha zava-dehibe ny tenantsika aho, ary koa mandrisika ny ray aman-dreny mba hamaky azy io satria ny maha tenanao dia tsy resaka safidy,” hoy izy. “Miezaka hatrany aho hianatra zavatra tsara avy amin'ny traikefa ratsy. Izany no hery tsara ho ahy. “
Tsy matoky ny fahamendrehana (meritocratie) ilay zazalahy vaky nify tamin'ny fahazazany noho izy mainty hoditra sy pelaka. Teny amin'ny tampon'ny tafon-tranony, na teo anelanelan'ny fanahazan-damba sy siniben-drano na tao amin'ny teatira sarimihetsika, nampiseho ny maha zava-dehibe ny fanomezan-kery miaraka amin'ny rehareha izy. “Isika, amin'ny maha mainty hoditra, pelaka sy avy amin'ny vondrom-piarahamonina mahantra dia tsy maintsy mijanona matanjaka. Ary izany isika, “hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/24/97205/
 Energia Positiva: https://www.youtube.com/channel/UCDo0b2LVx3_VRoXEDpJXhDQ